पानी खोज्दै बेसी झरेकाहरू त्यसपछि गाउँ उक्लिए ! | Nepal Flash
तनहुँ । गाउँभन्दा माथिपट्टी अर्को कुनै डाँडा छैन् । पूर्वतर्फ फर्केर हेर्दा धेरै तल सेती नदी र मादी नदी अविरल बगिरहन्छ । सेती र मादीमा बगेको पानी हेरेर मात्रै तिर्खा नमेटिने ! तिर्खा मेटाउनेलाई गाउँमा पानीको मुहान छैन् ।
हिउँद बर्खा जहिल्यै पानीको दुख । तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ मानहुँकोटबासी पानी खोज्दै काकाकुल झै भौतारिन्थे ।
मगर बस्तीमा ७० घर थिए । सबै परिवारको पिरलो खानेपानीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने नै हुन्थ्यो । अधेरीमा पधेरी नझरी दिन नढल्ने । रेवतीका अनुसार बर्खामा आकाशे पानी संकलन गर्नलाई अहिले जस्तो जस्ताले छाएको छानो थिएन् ।
अधिकांश घुमाउने घर खरले छाएका थिए । त्यसैले हिउँद बर्खा जहिले खानेपानी बोकेर तिर्खा मेटाउनु पर्थ्यो । वर्षेनी जनसंख्या बढ्दै, झनझन् गाउँमा पानीको हाहाकार मच्चिन थाल्यो । त्यसपछि गाउँलेले विकल्पको बाटो रोज्दै धमाधम मानहुँकोटको बेसी अलैँचे, सौराहा, चापाघाट, पाटन, गुणादी र दमौली आसपासमा बसाई सर्नथाले ।
गुल्जार गाउँ रित्तिदै गयो । ७० घरबाट घटेर पाँच घर मात्र सिमित बने । पढ्ने केटाकेटी कोही नभएपछि गाउँको आधारभुत विद्यालय पनि खारेज भएर ओरालो झरेको छ । रेवती भन्छिन्, ‘जहाँ गएनी एक कुराको त दुख हुन्छ नै भनेर हामी गाउँमा बसिरह्यौँ ।
तल गएनी घाँसको दुख हुन्थ्यो । घाँस काट्नलाई यहीँ आउनुपर्ने, दाउँरा काट्न यहीँ । एक कुराको त जसै दुख काट्न पर्छ यहीँ बस्छौ भनेर बसे । एक्लै भएपनि बस्छु भन्ने मनमा थियो । तर, अरु चार घरले पनि गाउँ छाडेनन् ।’
गाउँले बेसी झरेपछि कोदो मकै फल्ने बारीमा पाती र वनमाराहरू फुल्न थाले । खेतीपाती हुने गह्रामा सिरु र बाँवियोको गाँज झ्यांगिए । चिटिक्क परेका घुमाउने कति घर भत्किए, कति घर एक्लिए त्यसको लेखाजोखा नै छैन् ।
सदरमुकाम दमौली बजारको पश्चिम शिरको डाँडो मानहुँकोट दमौलीको झिलिमिली उज्यालो, सडकमा ट्या्..टु.. गर्दै हुइकिएका सवारी, सेती र मादी नदीमा बगिरहेको पानी हेर्दै टुलुटुलु बसिरह्यो ।
दमौलीबाट गाउँमा गाडी चढ्ला, बिजुली बजेर गाउँ झिलिमिली हाेला भनेर कसैले सोचेनन् । विस्तारै दमौलीको विकास उकालाे चढ्न थाल्यो । सडक मानहुँकोटमा उक्लियो, बस्तीमा उज्यालो पुग्यो ।
तैपनि बेसी झरेकाहरू थातथलोमा उक्लिएनन् । किनभने गाउँमा विकास उक्लिए पिन पानी उक्लिएको थिएन् । बरु दमौलीतिरका कहिलेकाहीँ मानहुँकोट डाँडोमा घुम्न उक्लन्थे । सधैँ शिरानमा देख्ने डाँडोमा उक्लेर रमाउदैँ भन्थे, ‘ओहो स्वर्ग जस्तै पो रहेछ !’
पोहोर साल हिउँदमा उत्पातै भो । कहिल्यै, कसैले नसोचेको संख्यामा पर्यटक मानहुँकोटमा उक्लिए । एकै दिन १० हजारसम्मको ताँती लाग्याे । कसैले फेसबुक, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम सामाजिक सञ्जाल जताततै मानहुँकोटको दृश्य छ्यापछ्पाप्ती भइदियो ।
मादी र सेतीबाट सुरु भएर दमौली बजारलाई ड्याम्म कुहिरोले घुम्टो ओढाएर सूर्य उदाएको मनाेरम दृश्यले धेरैलाई दमौली छाडेर एकपटक मानहुँकोट डाँडामा उक्लने हुटहुटी जगायो । मौसम छर्लङ्ग खुल्दा आँखै अगाडी टल्कने माछापुच्छ्रे, धौलागिरीलगायत हिमालका चुचुराले मोहनी लगायो ।
‘दमौलीमा व्यापार गर्न घर भाँडा धेरै तिर्नुपर्थ्याे । यहाँ आफ्नै गाउँ, आफ्नै जग्गा । भाडा पनि नलाग्ने । आफ्नै थलोमा व्यापार चल्ने भएपछि किन बजार बस्ने भनेर आयौँ’, उनले भनिन्, 'अहिले गाउँमै बाटो छ ।
जे चाहियो गाडीले ल्याइदिन्छ । पानी पनि ल्याइदिन्छ पैसा तिरेपछि । त्यही भएर हामी आयौँ । आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै गाउँमा ।’ उनका अनुसार बेँसी झरेकाहरूको आमा समूहले अहिले गाउँमा विद्यार्थीविहीन भएको विद्यालयको भवनमा होमस्टे चलाएका छन् ।
पाटन झरेका तिलबहादुर थापाको परिवार पनि गाउँ फर्किएको छ । गत हिउँदमा मानहुँकोट चम्कन थालेपछि पुसमा गाउँमा होटल चल्ने सम्भावना देखेर ६ जनाको परिवार गाउँ फर्किएको उनले बताए ।
‘पुरानो घर भत्किसकेको थियो । टिनको टहरा बनाएर होटल चलाएका छौँ । व्यापार राम्रै छ । सिजन सुरु हुदैछ, अझै बढ्छ होला’, उनले भने । तिलकबहादुरका अनुसार शुक्रबार र शनिबार मानहुँकोट उक्लने बढी हुन्छन् ।
बसन्ती र तिलबहादुरसँगै बसाई झरेका नौ घर पर्यटकसँगै गाउँ उक्लिएका छन् । पुरानो घर मानहुँकोट नभएकाहरू पनि व्यवसाय गर्न डाँडामा उक्लिएका छन् । होटल रेष्टुरेण्ट खुल्ने क्रम बढ्दो छ ।
पर्यटक उक्लिए, खानेपानीको अभावमा बसाइ झरेकाहरू पनि उक्लिए । तर, डाँडामा अझै खानेपानी उक्लन सकेको छैन् । बरु बजारको प्रशोधित जार र ट्यांकरको पानी भने मोटरबाटो हुदैँ उक्लिएको छ ।
मानहुँकोटमा पानी पुर्‍याउनलाई डिपिआर निर्माणको चरणमा रहेको व्यास नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । वडाको बजेटले नपुग्ने भएकाले डिपिआर बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘वडाको योजनाले भ्याउदैन् ।
त्यसैले नगरपालिका, प्रदेश सरकार र रोटरीसँग सहयोग लिने विकल्प राखेर डिपिआर बनाउँदैछौँ ।’ गाउँभन्दा निकै तल दुलेमा रहेको मुहानबाट गाउँमा पानी लैजान लागेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसअघि संघीय सरकारको सहयोगमा मानहुँकोटमा ड्रिलिङ गरेर जमिनमुनीको पानी तान्ने प्रयास गरिएको थियो । उक्त प्रयास सफल भएन ।
#पानी खोज्दै बेसी